အနာဂတ်တွင် ၀က်အင်္ဂါများကို လူသားများတွင် အစားထိုးနိုင်မည် – DigitalTimes.com.mm
274 Shares 69 Views
အနာဂတ်တွင် ၀က်အင်္ဂါများကို လူသားများတွင် အစားထိုးနိုင်မည်
Ko Thuya Aug 12, 2017
သိပ္ပံပညာရှင်များက CRISPR-Cas9 အမည်ရ မျိုးရိုးဗီဇ ပြုပြင်တဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ၀က်အင်္ဂါများကို လူသားများတွင် အစားထိုးနိုင်မယ့် နည်းပညာအတွက် အဓိကကျတဲ့ ခြေလှမ်းကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်နဲ့ ဇီဝ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ eGenesis မှ သိပ္ပံပညာရှင်များဟာ လူသားများကို အန္တရာယ်ပေးတဲ့ ၀က်မှ ဗိုင်းရက်စ်များ မကူးစက်အောင် ၀က်များရဲ့ DNA မှ မလိုလားအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းများကို ဖယ်ရှားတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ ပြုပြင်တဲ့ နည်းပညာ အသစ် CRISPR-Cas9 ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ပညာရှင်များက သူတို့ရဲ့ သုတေသနစာတမ်းမှာ လူသားများကို သေစေနိုင်လောက်အောင် အန္တရာယ်ပေးတဲ့ Porcine Endogenous Retroviruses (PERVs) မပါတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ ပြုပြင်ထားတဲ့ ၀က် ၃၇ ကောင်ကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းကို ရေးသားထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ နည်းပညာဟာ အနာဂတ်မှာ နှလုံး၊ အသည်းနဲ့ အဆုတ်များလို လူသားများရဲ့ ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများကို တိရိစ္ဆာန်များကနေ ရယူနိုင်အောင် ကူညီပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းဟာ တိရိစ္ဆာန်များမှာ လူကို သေစေနိုင်တဲ့ ဗိုင်းရက်စ်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းဖြင့် ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါများ အစားထိုးမှုမှာ စိန်ခေါ်မှုများစွာ ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများကို အစားမထိုးမီ ၀က်များရဲ့ အခြား မျိုးရိုးဗီဇကို ပြောင်းလဲရခြင်းနဲ့ အာဏာပိုင်များရဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ခံရခြင်းစတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ၀က် အင်္ဂါများကို လူသားများမှာ အစားထိုးနိုင်မယ့် အချိန်ဟာ နှစ်များစွာ ကြာမြင့်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
LG က V30 မှာ ကမ္ဘာ့ အကြည်လင်ဆုံး စမတ်ဖုန်း ကင်မရာ ပါမယ်လို့ ပြော
ဟက်ကာများက အနာဂတ်မှာ လူသားများရဲ့ DNA တွင် Malware များ ထည့်သွင်းနိုင်မည်
OnePlus5နဲ့ 5T တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ် OxygenOS Open Beta မှာ Google Lens ပါလာ
Ko Thuya - Jul 18, 2018
OnePlus5နဲ့ 5T တို့ရဲ့ ယခင်ထွက်ခဲ့တဲ့ OxygenOS Open Beta မှာ Project Treble ပါလာခဲ့ပါတယ်။ ယခုနောက်ဆုံးထုတ် ဗားရှင်းမှာလည်း လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်များ ပါလာပါတယ်။ OnePlus5ရဲ့ OxygenOS Open…
134 shares30 views
လူတစ်ယောက်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ယှဉ်လာနိုင်တော့မယ့် AI နည်းပညာဆိုတာ?
Nwe Oo - Jul 18, 2018
[Zawgyi] Artificial Intelligence (AI) ကိုဖန်တီးရတာတော်တော်လည်းရှုပ်ထွေးတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သလို ကိုယ့်အနေနဲ့ အသေးစိတ်ကြီးနားလည်နေဖို့လည်းမလိုပါဘူး။ အခုရှိပြီးသား သိဉာဏ်တုနည်းပညာအများစုကတော့ လူတွေရဲ့ဦးနှောက်လိုပဲ ကောင်းကောင်းခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုတွက်ချက်ဖို့အတွက် ဒေတာတွေမြောက်များစွာထည့်သွင်းရပြီး လူတွေသိတဲ့အရာတွေကနေ Model တစ်ခုတည်ဆောက်ခိုင်း၊ လူတွေမသိတဲ့အရာတွေကို ခန့်မှန်းခိုင်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီ AI နဲ့ တခြားကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တွေနဲ့ လုံးဝမတူတဲ့တစ်ချက်ကတော့…
201 shares32 views
မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် 8GB LPDDR5 DRAM တွေကို ထုတ်လုပ်တော့မယ့် Samsung
Tha Ra - Jul 18, 2018
[Zawgyi] Samsung အနေနဲ့ 8GB LPDDR5 DRAM Chip အကြောင်းတွေကို မနေ့ ညနေတုန်းက ကြေငြာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ 8GB LPDDR5 တွေဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ပထမဦးဆုံး 10nm အမျိူးအစား Chip များ ဖြစ်သလို 5G…
115 shares126 views
Xiaomi က ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာ Mi A2 Lite ကို မိတ်ဆက်မယ်လို့ အတည်ပြု
106 shares34 views
အဖြူရောင် Oppo Find X လာမည်
73 shares29 views
လေဆိပ်မှာ ခရီးသည်များကို ကူညီပေးမယ့် စက်ရုပ်
Ko Thuya - Jul 17, 2018
230 shares306 views
iPhone X ရဲ့ Animojis ကို Android Phone တိုင်းမှာ ဘယ်လို သုံးမလဲ ?
AI Android Android App Apple APPS asus Automobiles CAMERAS drone Facebook features GADGETS galaxy note series GAMING Google Huawei ios iPhone iPhone/ iPad iPhone 8 iPhone X knowledge LG local Microsoft mobile mobile devices Mobile Games MOBILES news Nokia OnePlus6Ooredoo PC/LAPTOPS samsung SCIENCE smart devices smartphones SOCIAL MEDIA Sony TABLETS technology telenor Vivo xiaomi